I-Intanethi Gay Ngesondo Imidlalo: Free Gaming Kuba Gay Bros!
I-intanethi Gay Ngesondo Imidlalo: makhe sifumane le umntu waqala!
Molweni apho: kwenu umzabalazo wenkululeko ukufumana decent kumnandi palace kuba bonke yakho gay gaming iimfuno? Kulungile, worry akukho vetshe malunga yakho plight: i-Intanethi Gay Ngesondo Imidlalo ngu apha rescue kuwe kwaye ibonisa ntoni ke sithetha ukuba anikele enkulu, umboniso kwaye ingqokelela ka-playable amaphawu kule niche. Oko sele ixesha elide ukuba i-phupha sophuhliso iqela ukwenza i-Internet ke, eyona iqonga enthusiasts kule genre: ke ngoku ixesha kuthi ukuba kubonisa ntoni similiselwe neyokusebenza phezu yokugqibela emihlanu!, Thina ngokwenene appreciate wonke umntu ke ixesha kwaye sikholelwa ekubeni kuthelekiswa nezinye eyoyikekayo iindawo phandle phaya, wonke umntu uza ufuna ukuza kuthi kuqala xa kufuneka babe abanye gay gaming ukukhutshwa. Qaphela ozayo ixesha ukuba sisebenzisa uzinikele ngokupheleleyo ukuba iyasebenza kule projekthi ukususela ngoku kude kube ngonaphakade – akukho ilitye uza kusala unturned de siyi-inani elinye kule umgca imveliso. Ngoko ke, kunye ukuze engqondweni, makhe thetha-shop malunga yintoni i-Intanethi Gay Ngesondo Imidlalo sele ukunikela kuwe. Ukuba ufuna musa bazive ngathi ufunda, nceda uzive ukhululekile ukwenza ingxelo msinyane kangangoko kunokwenzeka kwaye afumane lwelungu indawo kuba ngokwakho., Sele a real kumnandi intlanganiso kuwe kwaye ndiyathemba ukuba bonwabele zethu imidlalo kangangoko thina afunyanwe yenza kubo!
Ngenela ngoku for free
Omnye wemiceli-iingxaki nge-intanethi gaming uluntu kukuba kaninzi kunokuba hayi, kufunwa ukuba cough phezulu imali phambi kwenu ngokwenene ukufumana ukuba amava i-imidlalo. Ngexesha free iimvavanyo ziindleko enokwenzeka road ukuya ezantsi, thina figured ukuba izakuba nje kuba eyona ukuba sanika kude zethu imidlalo bakhululekile kwaye ke monetized zezinye iindlela. Esi sigqibo ingaba ngenene benefited kwethu kwi-sebenzisa ixesha elide, ukususela ngoku kuba ngakumbi amalungu kunokuba sinako anayithathela ngonaphakade phambi kokuba kwaye ukuba inani kuphela ikhangeleka ukwandisa wonke omnye mini., Enye inzuzo kwi-consumer kunye ukufumana free imidlalo kukuba oko ubeka i-extreme mthwalo ngomhla ababhekisi phambili ukugcina zabo iyamkhulula inyama kwaye enjoyable. Ukuba sisebenzisa ayikwazi ukugcina ufuna uvuma kwaye entertained kunye zethu imidlalo, nani ngokucacileyo yiya kwenye indawo, apho iphela phezulu costing kuthi kakhulu kwi-sebenzisa ixesha elide. Sino ithathwe omkhulu amanqanaba impembelelo ukusuka mainstream amaphawu ezifana League ka-Legends kwaye CS:YIYA. Ezi banikwa kude ngokupheleleyo simahla kwaye ingaba insanely ngempumelelo kwaye ziluncedo i-ababhekisi phambili isiphumo., Ukubeka ngokucacileyo, xa umqondiso ukuya kwi-Intanethi Gay Ngesondo Imidlalo uphumelele ukuba ahlawule nantoni na kwaye eso sithembiso ilungileyo ukususela ngoku kude kuphele ixesha. Ngaba literally kuba akukho nto kuphulukana nayo xa ufuna ukwenza i-akhawunti apha, ukususela ngaba akunjalo, ibe igcwalisiwe nayiphi intlawulo yi ngokupheleleyo kungokuzithandela!
Large gaming umboniso
Ngaphakathi, uzakufumana i ngaphezu nje kuphela isihloko: thina ngoku kuba 37 ngokupheleleyo ipapashwe iyamkhulula kunye ezinye ezintlanu kuzo uphuhliso olusebenzayo. Musa yiya ukucinga kuba yesibini ukuze sibe rush iyamkhulula nangona: wonke omnye umdlalo lukhangelwe ixesha ixesha kwakhona ukuba uqinisekise ukuba reaches zethu okulindelweyo. Sino absolutely akukho yethutyana malunga ppp isihloko ngoko ke ukuba abantu banako ukudlala omkhulu umdlalo xa ekugqibeleni siya kwenza macla zethu library. Ezona imperative into releasing elungileyo umdlalo xa ke ilungile, njengoko endaweni a amahlwempu umdlalo xa ngu-hayi., Ekubeni wathi ukuba, sino kuphela foliso ukukhutshwa kanye kwaye musa ngenene isicwangciso kwindlela esenza ngayo kwakhona. Sathi kanjalo kunikela free eyesibini ukufikelela amaxesha ngamaxesha ukuba ezahlukeneyo amaphawu ngoko ke, unako ukunceda thina kunye nophuhliso kwaye sixelele ukuba ucinga ntoni malunga zethu imidlalo. Ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba aqonde ukuba wonke omnye umdlalo senza ukukhutshwa kakhulu kakhulu eyodwa ngokunjalo: asinaphawu ufuna wena ucinga ukuba ezi zilungile khuphela ne cola amagama eencwadi, ukususela ngamnye omnye sele eyakhe eyodwa umsebenzi wobugcisa isimbo, uzibeke, gameplay indlela, njalo njalo., Kwaye kuba ngubani ke kukunceda kakhulu, wonke omnye isihloko uzakufumana ngaphakathi zethu mgangatho ukhona nakowuphi 100% ekhutshwe kwi-ndlu: asikholwa outsource nantoni na kwaye kuphela umsebenzi kunye abasebenzi ukususela iinkampani zethu ngaphandle kwezinye kakhulu rare iimeko. Ezi exclusive imidlalo ayifumaneki naphi na ongomnye kwi-Intanethi – sisebenzisa le sole abanini-mhlaba kwaye publishers kubo!
Fantastic iinkalo zoluntu
I-intanethi Gay Ngesondo Imidlalo ubani inani ngenene enjoyable zoluntu iimpawu ukuba uphelelwe kusenokwenzeka ukuba ke uthando njengoko i-gay gamer. Mhlawumbi omnye zoluntu ke, abaninzi bathanda imisebenzi ingaba bethu Discord umncedisi, ekhupha 7,000 esebenzayo amalungu ufumana amawaka imiyalezo kwi yonke imihla qho. Kukho dozens ka-amagumbi ngaphakathi apha ukuba kuvumela ukuba bathethe malunga wonke omnye umdlalo, share videos kunye nemifanekiso, thetha i-devs kunye nokwenza a inani ezinye elihle imisebenzi ukuba ubuya kusenokwenzeka ukuba ayinakufumana kwezinye gay gaming imigangatho., Sizo sose igosa kwi-Intanethi Gay Ngesondo Imidlalo iiforam, olugqibeleleyo kuba ngokuxoxa iincam kwaye amaqhinga ngokunjalo lwe eyakho amava kwaye ingxelo kunye iqela: into sisebenzisa ngonaphakade ngako oko kuba. Ecaleni ezi zimbini izixhobo, sizo sose i-achievements indlela endaweni ngokunjalo leaderboards kuba abo ngokwenene excel kwi-wonke omnye isihloko. Ukuba ufuna anayithathela onayo yintoni kuthatha ukuya phezulu ngokuchasene eyona? Beka ngokwakho ukuba uvavanyo namhlanje kunye zethu zonke-entsha speedrunning msebenzi! Nje qiniseka ukuba ukhe ubene olukhawulezayo, nto leyo iza kusenokwenzeka ukuba zithetha ethabatha esandleni sakho ngaphandle yakho cock – embi kakhulu.
Zokugqibela iingcinga kwi-Intanethi Gay Ngesondo Imidlalo
Kwiminyaka edlulileyo ukuba mna anayithathela uhleli apha, mna anayithathela ngenene grown ukuncoma i amanyathelo eli qela ithathe,, koko ke, nathi inyathelo elinye ozayo ka wonke umntu ongomnye. Oko wenziwe macala omabini imbeko kwaye ilungelo elilodwa ukusebenza apha, ngokunjalo ukuxoxa nawe namhlanje into yenza le ndawo ngoko ke otyebileyo kunye gay gaming fun. Enkosi kakhulu ngoko ke ethabatha ixesha ukufunda yonke into mna anayithathela ukubhalwa: ngu mhlawumbi elungileyo ixesha ukuya ozayo ngoku kwaye yenza eyakho i-akhawunti! Cinga ngokwenza kwaye ngoko ke nangeyiphina indlela, nokuba gay umdlalo kuwe end phezulu ukudlala elandelayo, ibe kuya kuba eyona omnye ngonaphakade!